Saamaynta dadka kale
Weligaa ma ku adkaatay inaad qof ku qanciso inuu sameeyo wax iyaga dani ugu jirto? Mararka qaarkood way adag tahay in qof maskaxda laga beddelo. Looma baahna in loo hanjabo, waxaad haysataa qalab badan oo aad haysato. Tababarkan, John Ullmen wuxuu sharxayaa sida loogu saameeyo kuwa kale meesha ugu sarraysa ee saamaynta lagu leeyahay, isagoo adeegsanaya 18 hab oo cilmi ahaan loo ansaxiyay. Haddii aad rabto inaad saameyn ku yeelato shaqada ama guriga
Saamaynta dadka kale Diisambar 12, 2020Tranquillus
READ Ku samee khariidad firfircoon leh Excel wax ka yar 1 saac!
socdaLaablaab wax soo saarkaaga: maaraynta waqtiga oo aan socod-baraha lahayn
Fasaxa lacag bixinta, RTT, CDD: waxa loo shaqeeyahaagu sameyn karo ilaa Juun 30, 2021
Qor qeexitaan wax ku ool ah!
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato tusmada sinnaanta jinsiga
Shaqooyinka deegaanka iyo qorsheynta isticmaalka dhulka